वन बेल्ट वन रोड : नेपालको लागि एउटा ठूलो भूल हो ?
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ६, २०७५
राजविराज : चिनको सबभन्दा नजिक भनिने देशहरुमा पहिलो नाम पाकिस्तानको आउँछ । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा चीनको ‘वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट’ शुरुआत देखि नै समर्पण गरेको छ । पाकिस्तानमा निर्मित चाईना पार्क इक्कोनोमिक कोरिडोर (सिपिइसी) ‘वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट’ परियोनजा को एउटा भाग हो । यो परियोजना अंतर्गत पाकिस्तान को नजिक देखि पेशावर सम्म रेल लाइन आधुनिकरण गरि यस रेल लाइनलाई चीनको दक्षिणी जिनजियांग रेलवे संग जोडिने छ । यस परियोजना अंतर्गत चीनद्वारा पाकिस्तान को ग्वादर एवं करांची बंदरगाह लाई विकसित गरिनेछ । चीन द्वारा ११ किलोमिटर सडक कराँची देखि लाहौर सम्म बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
चीनद्वारा चाईना पार्क इक्कोनोमिक कोरिडोर (सिपिइसी) परियोजना अन्तरगत ग्यास पाइप लाइन बिछाउने काम पनि भईरहेको छ । चीनद्वारा निर्मित विभिन्न परियोजना हेर्नमा त लोभ्याउने खालको छ । तर यस्तो परियोजनामा खर्च हुने रकम का कारण पाकिस्तान चीन को ऋण जाल फँसेर आफ्नो देशको अर्थव्यवस्था लाई तहसनहस पार्ने तिर अग्रसर भएको देखिन्छ । चाईना पार्क इक्कोनोमिक कोरिडोर (सिपिइसी) परियोजना अन्तरगत पाकिस्तान अहिलेसम्म चीनबाट ७२ बिलियन डलर ऋण लिईसकेको छ । फलस्वरुप पाकिस्तान को विदेशी ऋण बढेर जिडिपी टढ भई सकेको छ ।
गत बर्ष पाकिस्तान आफ्नो आर्थिक संकट बाट बाहिर निकल्नका लागि साउदी अरबबाट ४ट बिलियन डलर सहायता रकम माग गरेको छ । पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री इमारन खान गत बर्ष जुलाई २०१८ मा चाईना पार्क इक्कोनोमिक कोरिडोर (सिपिइसी) माथि पुनः विचार गर्न चीन गएका थिए । त्यतिवेला पनि प्रधानमंत्रीले ४२ बिलियन डलर सहायता रकम चीन संग मागेका थिए । पाकिस्तान सरकारका लागि चाईना पार्क इक्कोनोमिक कोरिडोर (सिपिइसी) परियोजना घाटीको हड्डी बनेको छ । हालै पाकिस्तानले विश्व बैंक संग पनि सहायता रकम माग गरिरकेको छ । पाकिस्तानका सामाचार एजेन्सीहरुले पटक–पटक चेतावनी दिदै आएको छ कि आउने समयमा पाकिस्तान चीनको उपनिवेशको रुपमा परिवर्तन हुन नसकुन । पाकिस्तान पहिला नै १०० बर्ष भन्दा बढी सम्म ब्रिटिस उपनिवेशको रुपमा रहि सकेको छ । यसबाट पाकिस्तानलाई शिक्षा लिनुपर्ने हो ।
नेपाल हाम्रो मातृभूमि हो । जुन कि प्राकृतिक संसाधनले परिपूर्ण छ । नेपालमा पनि चीन भारी मात्रामा निवेश गरिरहेको छ । विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि जस्तै रेल लाइन को जाल चीन देखि नेपालको विभिन्न प्रदेश सहित काठमाण्डौ , पोखरा, लुम्बनीलाई जोड्ने काम भईरहेको छ । गत बर्ष जुन २०१८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा चीन गएका थिए । उनले २.४ बिलियन को सम्झौता पत्रमा हस्ताक्ष्नर गरे । जसमा आधारभूत संरचना, ऊर्जा र २०१५ मा नेपालमा भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनरनिर्माण गरिने छ । सबभन्दा ठूलो परियोजना हिमालयको बिचबाट चीन एवं नेपाल बीच रेल लाइन विछाउने परियोजना हो । जसको लागत २.२५ बिलियन डलर रहेको छ र यो भन्दा पनि बढी हुन सक्ने छ । यस परियोजनाको ९८.५ प्रतिशत रेल लाइन, सुरुङ्ग पुल हिमालयको तलबाट गुज्रिनेछ जुन निर्माणको दृष्टिले सहज देखिदैन । यदि यो परियोजना सफलता पूर्वक सम्पन्न भायो भने के यसको उपयोग जुन समयमा गर्ने हो त्यस समयमा उपयोग हुनसक्छ ? किनभने हिमालय अस्भिर हो र यो भूकम्प क्षेत्रमा आउँछ जहाँ भुस्खलन र न्यूनतम तापमान हुन्छ । यस क्षेत्रमा रेल संचलन गर्न धेरै कठिनाई हुनसक्छ । यति मात्र होइन परियोजनालाई नियमित संचालनका लागि नेपाल एवं चीन सरकारको मेटेन्स खर्च अत्धिक लाग्न सक्छ । जो यसको उपयोगिता माथि नकारात्मक प्रभाव दर्शाउँछ ।
श्रीलंकाको हम्बटोटा वोर्ट चीनले भारि निवेश गरि बनायो तर वास्तवमा श्रीलंका त्यसलाई उपयोग गर्न सकेन । जसले श्रीलंका चीनको भारी ऋण जालमा फँस्यो । फलस्वरुप श्रीलंकाको हम्बटोटा बंदरगाह चीनले ९९ सालका लागि लीजमा दिनु प¥यो । किनभने श्रीलंकालाई चीनको भारी ऋण फिर्ता गर्न सम्भव भएन ।
नेपालले श्रीलंका तथा पाकिस्तान जस्तो देशको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा लिनुपर्ने हो । यस्तो होईन कि अर्को देश जस्तै नेपाल पनि चीनको ऋण जालमा फँसोस् । नेपाल सरकारले विदेशी निवेश आफ्नो देशमा ल्याओस् तर विदेशी निवेशको सबै पक्ष माथि बिचार गरि बुझेर ।
पछिल्लो केही बर्षमा चीनले नेपालमा २९ बिलियन डलर भन्दा बढी सानो ठूलो परियोजनामा निवेश गरिसकेको छ । चीनले नेपाललाई यति ठूलो मात्रामा दिएको ऋण नेपाल जस्तो सानो अर्थव्यवस्था भएको देशलाई ऋण चुक्ता गर्ने सम्भव हुन्छ त ?